သမီး အိမ်ပြန်လာရင် အမေတို့ အတူတူသေကြမယ် လို့ ငိုယိုပြီး စကားပါးလိုက်တဲ့ သရုပ်ဆောင် မယ်လိုဒီရဲ့ မိခင် – Update News
သမီး အိမ်ပြန်လာရင် အမေတို့ အတူတူသေကြမယ် လို့ ငိုယိုပြီး စကားပါးလိုက်တဲ့ သရုပ်ဆောင် မယ်လိုဒီရဲ့ မိခင်
‘သမီး အိမ်ပြန်လာရင် အမေတို့ အတူတူသေကြမယ်’ လို့ ငိုယိုပြီး စကားလက်ဆောင်ပါးလိုက်တဲ့ မယ်လိုဒီရဲ့ မိခင် အသားအရေကောင်းလွန်း.သူလေးအဖြစ် မိန်းကလေး.ပရိသတ်အများစုက အားကျနေရသူလေး.ကတော့ သရုပ်ဆောင်မ.င်းသမီးလေး မယ်လိုဒီပဲ ဖြစ်ပါ.တယ်။
သူမဟာ ဆယ်စုနှစ်​ေ ကျာ် တိုင်အောင်. ရုပ်ရှင်နဲ့ဗီဒီယိုဇာတ်ကားတွေများစွာကို ပီပြင်ပြောင်မြောက်တဲ့သရုပ်ဆောင်မှုတွေနဲ့ ရိုက်ကူးခဲ့ သူ တစ်ယော.က်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။တချို့ ပရိသတ်တွေကလည်း ယနေ့ချိန်အ.ထိသူမကို ချစ်ခ င်အားပေးနေကြဆဲပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အရင်ကာလတုန်းက အိမ်ထောင်ရေး.အဆင်မပြေဖြစ်သားလေးတစ်ယောက်နဲ့အတူ Single mother. အဖြစ် ရပ်တည်ပြီး အေးချမ်းတဲ့ဘဝလေးကိုဖြတ်သန်းနေသူဖြစ်ပါတယ်။ အာဏာသိမ်းပြီးနောက်. ပြည်သူတွေနဲ့မရပ်တည်တဲ့.အပြင် စစ်တပ်ကိုပါထောက်ခံနေလို့ လူအများရဲ့ အမုန်းကြီးမုန်းခြင်းကို ခံနေရပါတယ်
ထို့အပြင် စကစကလုပ်တဲ့ ပွဲ.တခုမှာပါ မင်းအောင်လှိုင်အား သွားတွေ့ဆုံ ကန်တော့ခဲ့လို့ ဝေဖန်မှု.များ ၂ဆ ခံရပြီး အသက်အနရာယ်လဲ ခြိမ်းခြောက်ခံနေရပါတယ် အခု သူမ ဝဍ်လည်နေပြီဖြစ်ကြောင်းနဲ့ သူမအမေကပါ အိမ်ပေါ်ကနေ မောင်းထုတ်လို့ ဝမ်းနည်းနေ.ကြောင်း အခုလို တင်လာခဲ့ပါတယ်
အမေကငိုတယ် အိမ်ပြန်မလာပါ နဲ့သမီးရယ်တဲ့အိမ်ကလွဲလို့ ကျွန်မမှာ အပြင်မှာနေစရာမရှိဘူး ကြာကြာလည်းမနေနိုင်ဘူး သားကိုလည်းမခွဲနိုင်ဘူးလို့ အမေတို့ရှောင်နေလိုက်ပါလားလို့ပြောတာကို
သမီးပြန်လာချင်ပြန်လာပါ အမေတို့ဘယ်မှမရှောင်ပါဘူးမိသားစုအားလုံး အတူတူသေကြမယ်တဲ့ ဒီလိုအချိန်မှာ သမီးကိုတစ်ယောက်တည်းမထားခဲ့ရက်ဘူး အမေအပေါ်သိတတ်တဲ့သမီးလေတဲ့ ခုတော့ ကျွန်မအိမ်မပြန်နိုင်သေးပါဘူးကျွန်မတစ်ယောက်တည်း ရပ်တည်နိုင်ပါတယ်
ဘဝမှာ မလုပ်နိုင်ခဲ့လည်း လုပ်ခဲ့ရသူမို့ထူးပြီးဒုက္ခလို့မငြီးချင်တော့ပါဘူး တစ်နေ့လေး ငါး ခါလောက် စိတ်ပူ ပေးကြတဲ့သူတွေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ် လို့ ဆိုထားပါတယ် မယ်လိုဒီဟာဆိုရင်ဖြင်​့ အခုဆို သူမအား အမဲဖျက်မဲ့လူတွေ ကိူကြောက်လို့ ပုန်းနေပြီဖြစ်ကြောင်းကိုလဲ ပြောထားပါတယ်